_L. A. Chakavanzika_. Makore makumi maviri eiyo James Ellroy yechinyakare bhaisikopo | Zvazvino Zvinyorwa
Mazuva ano iyo 70nd chinyorwa Del Cannes Firimu Mutambo izvozvo zvinopera mangwana. Zvakanaka, mune izvo zve 20 makore apfuura iyo firimu inoenderana ne LA Chakavanzika, iwo musoro wenyaya inozivikanwa kwazvo uye inozivikanwa James ellroy. Akamutungamira Curtis hanson (akafa munaGunyana apfuura).
El Imbwa Rabid yakabudiswa LA Chakavanzika en 1990 uye ivo vakachinjisa akati wandei mabasa kune cinema. Ini, ndakaverenga chinenge zvese pamusoro paEllroy, ndinazvo pakati pemabhuku angu emubhedha. Uye kubva muvhi ini ndinogona kungoti ndinofunga iyo nani kugadzirisa zvinogoneka uye a inyanzvi yeanhasi firimu noir. Uku kuongorora kweese maviri kumwe delivery special of the zviso iyo yavakaisa kumapurisa edu ekunyora. Nezvi Vakanyatsozvibata chaizvo. Mune zvese.
1 Iyo Los Angeles Quartet
2 LA Chakavanzika
5 Iyo bhaisikopo
Iyo Los Angeles Quartet
LA Chakavanzika ndiyo zita rechitatu yeiya inonzi Los Angeles Quartet, inoumbwa ne Dema Dahlia, Gwenga guru, LA Chakavanzika y Jazz chena. Vatatu vekupedzisira vanotevera chirongwa che a vatatu vevatambi vakuru, zvakajairika zvemunyori uyu.
Vese vane yavo kuoma zvese chimiro uye kuverenga, ndingangodaro ndichidaro LA Chakavanzika ndiyo yakanyanya. Asi ndosaka vachifarira kuverenga. Kune izvo uye zvake telegraphic uye yakasimba manyorerwo, haikodzeri matumbu akaomarara kana mweya wezvematongerwo enyika.
Los Angeles, 50s. Chiroto cheAmerica chinogara pamwe chete zvinonyadzisirala huori hwemapurisa and the kunyengera pasi peguta. A kutyisa kuuraya vanhu vazhinji inoisa ma alarm ese paLAPD. Ikoko hupenyu hwe mapurisa matatu izvo hazvigone kuve zvakasiyana. Kuferefetwa kwavanotanga kunozovaisa zvakazara mu musungo maze kuti vane zvakawanda mukati kupfuura kunze, uye mavari. Uye mhedzisiro yacho inogona kuve yakanyanya.
Ivo havaverengeke. Nemanyepo, iyo reales, semusoro unozivikanwa weLAPD, William H Parker, kana mabhanditi Jack Dragna kana Mickey cohen. Asi ngatione chinonyanya kukosha.
Ed ExleyGuy Pearce. Chido uye nyota ye kubwinya, kusvika pairi ndizvo anokwanisa kutyora chero mutemo. Iye zvakare anotarisira kupfuudza baba vake, ane mukurumbira aimbove mupurisa uye muhombe muhombe uyo apfuura. Zviri muhwina akazvarwa uye uwane zvaunoda chero zvodii.
Jack Vincennes (Kevin Spacey). Muenzaniso werumwe rudzi rwekuda, iyo ye mukurumbira. Inonzwa zvakanyanya kunge a mukurumbira, ndiye chipangamazano pane yakakurumbira terevhizheni nhepfenyuro (Kudza chikwangwani) nezve mapurisa uye haana hapana chakaipa kupfuudza ruzivo kumagazini akaiswa mumapepa. Asi iye zvakare achazvuzvurudzwa nechirongwa chichaita kuti aongorore zvakare misimboti yake. Kunyangwe kana zvanyanyisa.
Bud White (Russell Crowe). Zvese zvakatarisana nezvakaitika kare. Izvi yakatarwa nerufu rweutsinye hwaamai vake, iyo yaakapupurira achiri mudiki, uye ane yakakosha kushushikana nevanoshungurudza yevakadzi. Saka chisimba Chemhondoro kugumbuka Nemasikirwo ayo, zvisinei, zvinoratidzwa se muongorori akanaka, iri pamberi pevose vari vaviri mukuferefeta uye muchiito. Unyanzvi hwake hunobhadhara zvikuru, asi hunobhadharwawo.
Dudley Smith (James Cromwell). Kapiteni Smith, akarondedzerwa munoverengeka seakatenderera mutsvuku muIrish, ndiye hunhu batanidza zvese zvina. Imwe ye zviri nani yezvose zvakagadzirwa naEllroy, zvekupona izvo hunhu hwadhiabhorosi. Muenzaniso wakakwana we madhadhi makuru zvinyorwa haugone kunzvenga kuyemura.
Lynn BrackenKim Basinger. Mavara echikadzi mune basa raEllroy vashoma, asi vanazvo yakawanda simba uye yemanzwiro kuchaja. Kana ivo vasiri iwo mabhureki evarume vechirume, ivo vanotora itsvo dzeichi chiito kana vane danho mariri. Iyo pfambi yemhando yepamusoro iyo inoteedzera Veronica Lake ingori imwe chete musikana ari nyore yevanhu vane vavariro chete. Saka hachisi chirevo chekuti anogara nemurume asingatsvagewo kukudzwa.
Zvanga zviri sei hazvigoneke kukudziridza mumutauro we cinematographic iyo yakaoma kunzwisisa uye yakazara zano, munyori wechinyorwa brian helgeland uye mutungamiriri Curtis hanson ivo vakaita a basa reinjiniya izvo nerombo rakanaka zvakavafambira chaizvo. Zvakanaka izvo vakakunda oscar gore rakatevera yakashandurwa zvakanakisa screenplay. Asi pamusoro pezvose zvavainazvo chengeta musimboti yezvakatanga. Ivo zvakare vakakwanisa kuunganidza a Kumisikidza kwakanakisa, rwiyo uye kutora mifananidzo. Uye ivo vakapedza basa nesarudzo ye choral cast mune nyasha.
Kubudirira: isa hoko yakanaka ine mazita enyeredzi senge Spacey y Basinger (iyo zvakare yakakunda iyo Oscar a mutambi anonyanya kutsigira). Vakanga vakabatanidzwa neimwe fashoni yechipiri senge Cromwell (Zvakasarudzika saCaptain Smith, kunyangwe muviri wake waisaenderana newemunyori Smith). Uye vakagona izvozvo zviso zviviri zvisina kuzivikanwa (Pearce y Crowe) zvinokanganisa chaizvo nekuti hazvigone kuverengerwa nezvakamboitika mareferensi, nekudaro vakava mavara.
Mugumisiro: chii Kana mumwe munhu asati azviona izvozvi, zviri kutora nguva kuzviita ndichingopedza kuverenga izvi. Kune avo vedu vakazviona, ngatiti, dzinosvika makumi maviri emamiriyoni nguva pamusoro pemakore makumi maviri uye isu tinoziva hurukuro nemoyo (uye neChirungu), nekuti zvakare hazvina basa kana.
Zvizhinji nezve LA Confidencial pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » _L. A. Chakavanzika_. Makore makumi maviri ebhaisikopo raJames Ellroy
Inonakidza firimu yakaitwa zvine mutsindo, inonakidza cast. Makore makumi maviri kare !!!. Ini handinete kumuona
Chii chandingakuudza? Kuti iniwo handinete ...
Mariola, hauna kukwanisa kupa mutero unoshamisa kudaro kufirimu ino iri chikamu chehupenyu hwangu. Makandiita kuti ndife ndichida kuzviona, uye izvo ... ndinozviziva nemusoro. Kutenderera chinyorwa, kutenderera bhaisikopo, kutenderera kuchinjika, vatambi vekutenderera uye asina kupfuura Ellroy.
Zvakanaka ndinotaura zvakafanana. Chii chausingazive mushure mekunge tataura chiuru? Ndatenda nekutaura kwako.
Uyu ndiye Mutema Dahlia nemunyori mumwe chete, anoyevedza mafirimu uye yakanaka kwazvo novel, ini zvese ndakakurudzira gumi kubva gumi
Hongu zvakare. Une chirevo cheLa Dalia negra futi, asi kwandiri firimu raBrian De Palma rakagara nguva refu risati rasvika. Ini ndinonyanya kufarira bhuku racho.
Arundhati Roy anoburitsa bhuku idzva mushure memakore makumi maviri